LYNX Technik AG: #NABShow တွင်စိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်သောမျက်နှာပြင်များဖန်တီးခြင်း NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 NAB ပြရန် » Lynx Technik AG က: #NABShow မှာမိမိစိတ်ကြိုက် control interface Creating
Lynx Technik AG က: #NABShow မှာမိမိစိတ်ကြိုက် control interface Creating
အဆိုပါ Lynx Technik စီးရီး 5000 signal ကို Processor ကိုများအတွက် CustomControl အယ်ဒီတာ, အ 5000 module တစ်ခုစနစ်များများအတွက် Lynx Technik ရဲ့ APPolo ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်အဘို့အ template ကိုထိန်းချုပ်အဆုံးအသုံးပြုသူတစ်ဦးလွယ်ကူသောဆွဲခွင့်ပြုနဲ့ထုံးစံအသုံးပြုသူ interfaces တည်စေသည်ဟု interface ကို drop အဖြစ်။ Lynx Technik AG ကရဲ့လက်ရှိ client နှင့်အလားအလာရှိသောအနာဂတ်ဖောက်သည်ပြဘို့ APPolo ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်အဘို့အ CustomControl ၏ပစ်လွှတ်, NAB 2014 မှာဖြစ်လိမ့်မည်! စိတ်ကြိုက်ကို virtual software ကိုထိန်းချုပ်ပြားဖန်တီးခြင်းနှင့်အဆောက်အဦဖို့ရိုးရှင်းတဲ့လွယ်ကူချဉ်းကပ်ထုတ်ကုန်လိုင်းမှဒီအံ့သြစရာတိုးမြှင့်စေပြီ။
တစ်ဦး CustomControl tool ကိုစသင့်ရဲ့အိုင်ပက်ကိုဖွင့်ဖို့စွမ်းရည်ကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသော option တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ iOS အတွက် App ကိုမိုဘိုင်းနှင့်အတူ CustomControl tool ကို, အကို Apple က App Store မှဒေါင်းလုပ်ခြင်း, တစ်ချိန်က installed, သင့် CustomControl သို့ log ဖြစ်ပါတယ်, သင်ချက်ချင်းသင်၏ user account နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်ကြောင်းကိုသင်၏စီးရီး 5000 module တွေထိန်းချုပ်ထားကိုစတင်နိုင်သည်! ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ:
" ... အဆိုပါ Lynx Technik APPolo ထိန်းချုပ်ရေး SystemTM ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှု, status ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် SNMP အမှားအစီရင်ခံများအတွက်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေအလိုလိုသိနှင့် Self-configuring ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါစီးရီး 5000 CardModule စနစ်ဖြင့်အသုံးပြု APPolo အလွယ်တကူသင့် system နဲ့အတူကြီးထွားဖို့တိုးချဲ့နိုင်သည့်ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏နှလုံးသည်။ တစ်ခုတည်းထိန်သိမ်းထံမှကွဲပြားခြားနားသောနေရာများတွင်တည်ရှိသောထိန်သိမ်း၏စာသားရာပေါင်းများစွာရန်, စနစ်အလွယ်တကူအသေးစားသို့မဟုတ်ကြီးမားသောစီးရီး 5000 စနစ်အားတပ်ဆင်ထိန်းချုပ်ဘို့သုံးနိုင်တယ် .. "
အသစ် CustomControl အင်္ဂါရပ် Lynx Technik စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် NAB 2014 တဲ, N1120 မှာသရုပ်ပြလိမ့်မည်။ yellobriks ၏ Lynx Technik မိသားစု N1120 နှင့် SL5028 နှစ်ဦးစလုံးအပေါ် Display ကိုရလိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင်အဆိုပါ Lynx Technik AG ကယ့်ကြီးမြတ် "အခမဲ့ထိန်သိမ်းဘောင်, ပါဝါထောက်ပံ့ရေး, ထိန်သိမ်း controller နှင့်မဆို4၎င်း module ဝယ်ယူနှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုစနစ်အပေါ်ထွက်လက်လွတ်မကြဘူး! အသေးစိတ်:
အခမဲ့သိုလှောင်ဆင် Frame ကမြှင့်တင်ရေး
တစ်ဦးကိုအခမဲ့သိုလှောင်ဆင် Frame က + Power Supply + ကွန်ယက်သိုလှောင်ဆင် Controller ဟာမဆို4စီးရီးများ၏ဝယ်ယူအတူ APPolo ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အရရန်ကန့်သတ်အချိန်ကမ်းလှမ်းချက်ကို၏အားသာချက်ကိုယူ | 5000 module တွေ။
| ဒါက Lynx စီးရီး၏အရည်အသွေးနှင့်အာဏာကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည် 5000 terminal ကိုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ APPolo ထိန်းချုပ်မှုစနစ်။
ကမ်းလှမ်းမှုကိုဧပြီလ 30th 2014 ကုန်ဆုံး
အမိန့်အဘို့သင့်အခွင့်အာဏာ Lynx Technik ဖြန့်ဖြူးဆက်သွယ်ပါ
2014 NAB ပြရန် NAB ပြရန်, Las Vegas မှာ, Pamela Kleibrink Thompson က, 2014-04-04
ယခင်: Adobe က Primetime နှင့်အတူ၎င်း၏ Multiscreen န်ဆောင်မှုများ၏သဟဇာတကြေညာချက်များပေါင်းစည်းရေး
နောက်တစ်ခု: MultiDyne (R) fiber-optic နေရင်မြန်အောင်၏ရိုးရှင်းသော, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောလမ်းကြောင်းများအတွက် All-Optical LightningSwitch မိတ်ဆက်